သူရဲ့ဘ၀ခက်ခဲနေတာတောင် အကြောသေနေတဲ့ အမေကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ မသန်စွမ်းအမျိုးသား - Myanmar Red News
သူရဲ့ဘ၀ခက်ခဲနေတာတောင် အကြောသေနေတဲ့ အမေကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ မသန်စွမ်းအမျိုးသား
တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့Chongqing ကျေးရွာမှာ နေထိုင်နေတဲ့Chen Xinyinအမည်ရှိအမျိုးသားတစ်ဦးဟာအခြားသူတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။Xinyinဟာ၇နှစ်အရွယ်မှာဓာတ်လိုက်ခံရခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဘက်စလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင် ယသူက၄၈နှစ်အရွယ်ရှိနေပါပြီ။
Xinyinကသူ့ကိုယ်သူဘယ်လို စောင့်ရှောက်ရမယ်၊မိသားစုတွေကိုဘယ်လို‌ကျွေးမွေးရမယ်စတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုသင်ယူခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့Xinyinဟာအကြောသေ‌ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ ၉၁နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အမေအိုကိုလည်းသူစောင့်ရှောက်‌နေရပါတယ်။Xinyinဟာဘယ်အလုပ်တွေကိုမဆိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင့်အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သူကတခါတလေဆိုသူ့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေရဲ့အိမ်မှုဝေယျာဝစ္စတွေကိုလည်းကူညီပေးသေးတယ်။ သူ့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေ ပြောဆိုချက်အရ Xinyin ဟာလက်နှစ်ဘက်ရှိတဲ့လူတွေထက်အလုပ်ကိုပိုမြန်‌အောင်လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်။
သူကကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘဲအားကိုးပြီးသူ့ကိုမသန်စွမ်းတဲ့လူ၊ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့လူဆိုပြီးလုံးဝအနိမ်မခံတဲ့သူပါ။. Xinyinက ဝေယျာဝစ္စတွေနဲ့။သူအမေအဖေတွေရဲ့အလုပ်ကိုအသက်၁၄နှစ်ကတည်းကစပြီးကူညီခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ကဆိတ်တွေ၊ကျွဲတွေကိုထိန်းကြောင်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့အလုပ်ပါ။Xinyinကသူရဲ့ခြေချောင်းတွေနဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။သို့ပေမဲ့လည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖိနပ်မစီးဘဲလမ်းလျှောက်နေရပြီး ဆောင်းရာသီအချိန်တွေမှာအပြင်ကိုလမ်း‌လျှောက်ထွက်ရင် ခြေအိတ်၊ဖိနပ် တွေမပါဘဲသွားလို့ခြေချောင်းလေးတွေအနာဖြစ် ခဲ့ရပါတယ်။
Xinyinရဲ့အသက်၂၀၊ ၃၀ အရွယ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ သူ့ရဲ့အဖေကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။၉၁နှစ်အရွယ်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အမေဟာသူမရဲ့ ယောကျာ်းကွယ်လွန်ပြီးကတည်းကကျန်မာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာပြီးတစ်လအကြာမှာဘဲအကြောသေဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံတစ်ဦးကXinyinကိုသူ့ခြေထောက်နဲ့အလုပ်လုပ်စားနေမဲ့အစား တောင်းစားဖို့အကြံပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့Xinyinကစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပြီး”ကျွန်တော့်မှာလက်မရှိပေမဲ့ ခြေထောက်ရှိသေးတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျွေးမွေးလုပ်ကိုင်နိုင်တယ်” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်သူ့ကိုမှီခိုနေရတဲ့ အမေအိုကိုသူမရှိရင်ဘယ်သူမှမစောင့်ရှောက်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်သူ့အမေနားမှာဘဲအမြဲတမ်းကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက် နေခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ့ဘဝခကျခဲနတောတောငျ အကွောသနေတေဲ့ အမကေို စောငျ့ရှောကျနတေဲ့ မသနျစှမျးအမြိုးသား
တရုတျနိုငျငံအနောကျတောငျပိုငျးမှာရှိတဲ့Chongqing ကြေးရှာမှာ နထေိုငျနတေဲ့Chen Xinyinအမညျရှိအမြိုးသားတဈဦးဟာအခွားသူတှရေဲ့အကူအညီမပါဘဲဘဝကိုရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ နထေိုငျသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။Xinyinဟာ၇နှဈအရှယျမှာဓာတျလိုကျခံရခွငျးကွောငျ့သူ့ရဲ့လကျနှဈဘကျစလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။အခုဆိုရငျ ယသူက၄၈နှဈအရှယျရှိနပေါပွီ။
Xinyinကသူ့ကိုယျသူဘယျလို စောငျ့ရှောကျရမယျ၊မိသားစုတှကေိုဘယျလို‌ကြှေးမှေးရမယျစတဲ့လုပျဆောငျမှုတှကေိုသငျယူခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။ဒါပမေဲ့Xinyinဟာအကွောသေ‌ဝဒေနာခံစားနရေတဲ့ ၉၁နှဈအရှယျရှိပွီးဖွဈတဲ့အမအေိုကိုလညျးသူစောငျ့ရှောကျ‌နရေပါတယျ။Xinyinဟာဘယျအလုပျတှကေိုမဆိုသူကိုယျတိုငျလုပျကိုငျနိုငျကွောငျ့အခိုငျအမာပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
သူကတခါတလဆေိုသူ့ရဲ့အိမျနီးနားခငျြးတှရေဲ့အိမျမှုဝယြောဝစ်စတှကေိုလညျးကူညီပေးသေးတယျ။ သူ့ရဲ့အိမျနီးနားခငျြးတှေ ပွောဆိုခကျြအရ Xinyin ဟာလကျနှဈဘကျရှိတဲ့လူတှထေကျအလုပျကိုပိုမွနျ‌အောငျလုပျကိုငျနိုငျတယျ။
သူကကိုယျ့ကိုကိုယျဘဲအားကိုးပွီးသူ့ကိုမသနျစှမျးတဲ့လူ၊ဘာမှမလုပျနိုငျတဲ့လူဆိုပွီးလုံးဝအနိမျမခံတဲ့သူပါ။. Xinyinက ဝယြောဝစ်စတှနေဲ့။သူအမအေဖတှေရေဲ့အလုပျကိုအသကျ၁၄နှဈကတညျးကစပွီးကူညီခဲ့ပါတယျ။သူ့ရဲ့အလုပျကဆိတျတှေ၊ကြှဲတှကေိုထိနျးကွောငျးစောငျ့ရှောကျရတဲ့အလုပျပါ။Xinyinကသူရဲ့ခွခြေောငျးတှနေဲ့ ဝယြောဝစ်စတှကေိုကြှမျးကငျြစှာလုပျဆောငျနိုငျတယျ။သို့ပမေဲ့လညျးတဈနှဈပတျလုံးဖိနပျမစီးဘဲလမျးလြှောကျနရေပွီး ဆောငျးရာသီအခြိနျတှမှောအပွငျကိုလမျး‌လြှောကျထှကျရငျ ခွအေိတျ၊ဖိနပျ တှမေပါဘဲသှားလို့ခွခြေောငျးလေးတှအေနာဖွဈ ခဲ့ရပါတယျ။
Xinyinရဲ့အသကျ၂၀၊ ၃၀ အရှယျဝနျးကငျြလောကျမှာ သူ့ရဲ့အဖကှေယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။၉၁နှဈအရှယျဖွဈတဲ့သူ့ရဲ့အမဟောသူမရဲ့ ယောကျြားကှယျလှနျပွီးကတညျးကကနျြမာရေးအခွအေနဆေိုးရှားလာပွီးတဈလအကွာမှာဘဲအကွောသဝေဒေနာကိုခံစားခဲ့ရပါတယျ။ဒသေခံတဈဦးကXinyinကိုသူ့ခွထေောကျနဲ့အလုပျလုပျစားနမေဲ့အစား တောငျးစားဖို့အကွံပေးခဲ့ဖူးပါတယျ။ဒါပမေဲ့Xinyinကစိတျဆိုးသှားခဲ့ပွီး”ကြှနျတေျာ့မှာလကျမရှိပမေဲ့ ခွထေောကျရှိသေးတယျ။
ကိုယျ့ကိုကိုယျ ကြှေးမှေးလုပျကိုငျနိုငျတယျ” လို့ ပွနျပွောလိုကျပါတယျ။အဲ့ဒီအပွငျသူ့ကိုမှီခိုနရေတဲ့ အမအေိုကိုသူမရှိရငျဘယျသူမှမစောငျ့ရှောကျမှာကိုလညျး စိုးရိမျနတေဲ့အတှကျသူ့အမနေားမှာဘဲအမွဲတမျးကြှေးမှေးပွုစုစောငျ့ရှောကျ နခေဲ့ပါတယျ။
Previous Postအခြေခံလူ တန်းစားများ အတွက် ထောက်ပံ့ကြေးများ နိုင်ငံတော်မှ ဒီလထဲနောက်တစ်ခါထပ်ပေးမယ်
Next Postလမ်းဘေးခွေးတွေအတွက် TV အဟောင်းများကို နေအိမ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ နှလုံးလှပိုင်ရှင်
အခက်အခဲကြားမှ မွေးခါစကလေးကိုပွေ့ချီပြီး မဲထည့်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို ၃သိန်း ဂုဏ်ပြုလှူဒါန်း
Covid-19 ရဲ့ နောက်ထပ်သားကောင်ဖြစ်ဦးမယ့် အာရှနိုင်ငံ တခု
အီတလီနိုင်ငံက အသက် ၉၆ နှစ်ရောက်မှ တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရသူ